कोरियामा महिलाले तिजमा आफू सँगै नचाए कोरियनलाई – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१६ मंसिर २०७७, मंगलवार ०१:३८ English
कोरियामा महिलाले तिजमा आफू सँगै नचाए कोरियनलाई
मीन प्रकाश उप्रेती, सउल । कोरियाको दुन्देमुन सहर नेपाली पहरिनमा सजिएका महिलाहरुले भरिभराउछ । रातो हरियो पहेला साडी चोलो र पोतेहरुले सजिएका महिलाहरु टाढा टाढा बाट आइरहेको दृश्यले कोरियन लगाएतका अन्य देशिहरुलाई मनमोहक बनाएको सजिलै अनुमान गर्न सकन्थियो । मानौआजको दिन त्यो सहर नेपालीकोमात्र हो ।
तर एकै छनिमा कोरियन नागरिकहरू पनि तिजका गीतमा नेपालीसगै नाचेको देख्दा उपस्थित महिलाहरुका आँखामा हर्षका आशु देखिएको थियो आजत नेपालमै भएजस्तो भयो होकि ? उनीहरू एक आपसमा कुरा र्गदै थिए । यो दृश्य हो कोरियामा नेपाली महलिाहरुले मनाएको तीजको ।
आइतबार महिलाका लागि महिला संस्थाद्वारा आयोजना गिऐको तिज कार्यक्रममा नेपालीले मात्र होइन कोरियनहरुले पनि भरपुर आनन्द लिएका थिए । तुन्देमुन सहरको नमस्ते रेष्टुरेण्टमा भएको उक्त कार्यक्रममा नेपाली महिलाहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो ।
महिलाका लागि महलिा संस्थालाई स्थापनाकाल देखि सहयोग गर्दै आयोगको एक चर्चाका प्रमुख याङ्गली ले नेपालीहरूको सस्कृती प्रति आफू गर्भीत भएको बताए ।
यसै गरी प्रमुख अतथिीको आशन बाट बोल्दै नेपाली दूतावास कोरियाकी प्रतिनिधि प्रथमा उप्रेतीले नेपालीहरू संसारको जुनसुकै कुनामा कनि नहुन आफ्नो सस्ंकृती जोगाउन पछि नपर्ने बताईन । उता संस्थाकी अधक्ष्य कोपिला र्राईले प्रवासी भुममिा नेपाली महिलाले नेपाली सस्ंकृती देखाएको यो उपस्थितिले आफू उत्साहित भएको बताईन । नेपालीहरू सुखमा मात्रहोईन दुखमा पनि रमाउन सक्छन् भन्ने कुराको प्रमाण आजको कार्यक्रमले दिएको राईको भानाई थियो ।
संस्थाकी उपाध्यक्ष जुनु गुरुङ्गले प्रवाशामा नेपाली महिलाहरुको योगान कम नभएको प्रमाण आजको कार्यक्रमले दएिको बताईन ।
कार्यक्रमका अन्य अतथिीहरुमा समाजसेबी रुद्र शर्मा , एन आर एन पूर्व अध्क्ष विनोद कुवर, व्यवसायी गङ्गा राज राई , कोरिया सन्देश क्लबका अध्क्ष तथा पत्रकार मीन प्रकाश उप्रेती, रघु त्रिपाठी, डम्बर सुब्बा, जनसम्पर्क समिति कोरियाकी अध्यक्ष गङ्गा थापा लगाएतको उपस्थिति रहेको थियो ।
उपस्थित सबैलाई नेपाली खानाले स्वागत गरिएको थियो संस्थाकी अध्यक्ष कोपिला राईको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव बिमला श्रेष्ठले गरेकी थिइन ।
१ आश्विन २०६९, सोमबार २१:१४ मा प्रकाशित